Ungachinja sei disc brake caliper - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Ungachinja sei disc brake caliper
Kazhinji, mabhureki akavharika akavimbika kwazvo, uye anoda kutsiva kazhinji kashoma pane mapads nema disc, asi kana uchifanira kuchinja imwe, heino nzira yekuzviita!
Kune akawanda akasiyana mabhureki akaomarara, asi mune akawanda kesi, mota dzakasungirirwa imwechete piston inotsvedza macalipers ayo anowanzo gadzirirwa nenzira imwechete. Iyo caliper yakabatana nemutakuri iyo yakabatana nehubhu yemota. Ipo iwe uchikwanisa kutsiva calipers iwe pachako mapedhi nemadhisiki zvinogara zvichida kutsiviwa vaviri vaviri pane ekisero.
Usaedze kuchinja chinokanganisa kunze kwekunge iwe uchiziva zvauri kuita, kana iwe uine hunyanzvi hwekutarisa. Iwe haugone kutora njodzi nechero chinhu chemabhureki emota.
Chengetedza mota zvakachengeteka, uchishandisa maekisero uye mavhiri, uye bvisa mugwagwa. vhiri.
Anotakura anowanzo sungwa kune hub ine mabhaudhi maviri, aya anogona kusiiwa munzvimbo kana iwe uchingo shandura iyo caliper - asi inoda kuzobviswa kana iwe uchichinjawo disc.
Iyo caliper inochengetedzwa kumutakuri nemabhaudhi maviri, kazhinji iine Allen misoro, iyo inochengetedza peya yemapini ekutsvedza mumuviri weanomira.
Nokubvisa Allen mabhaudhi iwe unozogona kuhwina iyo caliper zvakanyatsobva padhisiki. Zvinogona kuve zvinonetsa kubvisa, saka chenjera kana uri kushandisa pry bar.
Necakabvisa yakabvisa mapedhi anozoburitsa kunze - anowanzo kubatwa munzvimbo nezvikamu.
Iyo tambo yebrake inoda kubviswa zvakanyatso nyatso kubva ku caliper. Iwe unozoda chiyeuchidzo chekubata chero mabhureki emvura anozobuda (usawane izvi pane pendi).
Iine iyo nyowani nyowani ita kuti pisitoni isundidzirwe musilinda yayo neyaviri yemapombi pombi, iyo G-simbi, kana yakafanana. Mashure mapistoni anowanzo kuve eiyo 'mhepo-yekumashure' akasiyana uye anoda kudzoserwa musirinda ine brake mhepo-kumashure chishandiso. Izvi zvakachipa kutenga, uye zviri nyore kushandisa.
Iwo mapedhi anogona ipapo kuendeswazve kune iyo yekumira (iine chero anodiwa clip kana pini) uye iyo caliper yakaiswa pane anotakura.
Refit the caliper sliding bolts and check that they are in good order and slide zvakanaka.
Spin iyo hub uye uone kuti macalipers akanyatso kuwanikwa pamusoro pe disc, pasina kusunga (kumwe kusunga kwechiedza kunotarisirwa).
Nemabhaudhi ese akachengetedza pombi yemabhureki inoda kubatanidzwa, uye iyo yekumira yakabuda ropa kubvisa mweya.
Tevedza maitiro akajairika ekubuda ropa (kungave neine munhu-akabuda ropa kit, kana nerubatsiro rwemubatsiri, uye uve shuwa yekuchengetedza iyo brake fluid dziva rakakwira kusvika padanho chairo.
Tarisa mabhaudhi ese usati waisazve vhiri uye uchibhinya mabhaudhi / manati padanho rakatarwa.
Ziva kuti bhureki rekumedura rinogona kuda 'mapampu' akati wandei kuti riunze padhi rekubata ne disc. Tyaira nokungwarira uye uve nechokwadi chekuti mabhureki anoshanda nemazvo.